Notice | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်၏ ဗမာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအားလုံးသို့ပန်ကြားချက်။
မျှဝေသူ Unknown မှာ Friday, April 27, 2012 No comments:
from We Fight We Win by u pan
မျှဝေသူ Unknown မှာ Monday, April 23, 2012 No comments:
ကျွန်တော် အရင်တစ်နေ့က ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီ software များကို တွေ့ကရာ ဆိုက်တွေကနေ Download မလုပ်မိဖို့နှင့် install မလုပ်မိကြဖို့ပါ . ကျွန်တော်တို့ နည်းပညာစတင်လေ့လာ သူများအနေဖြင့် မ၀င်ရောက်သင့် Download မလုပ်သင့်သော နေရာများ အများအပြား ရှိသည့်အနက် လတ်တလော တစ်ကယ့်ကို software များကို မက်မက်မောမောနှင့် Download လုပ်ချင်စဖွယ် ဖြစ်အောင် တင်ပေးထားသည့် ၀ဘ်ဆိုက် စာရင်းကို ကျွန်တော် ရေးပေးပါ့မယ် . ထပ်မံပြီး သတိပေးလိုက်ပါသည်။
လုံးဝ(လုံးဝ) Download မလုပ်မိပါစေနှင့်၊ အဆိုပါ ၀ဘ်ဆိုက်မှာ link များကို ကူးယူပြီး ပို့စ်တင်ထားသူများ ရှိပါက ဖျက်ပေးစေလိုပါသည်။ မိမိကွန်ပျူတာအတွက် ကောင်းကျိုးမရှိဘဲ ဆိုးကျိုးများသာ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်
မျှဝေသူ Unknown မှာ Friday, April 06, 2012 No comments:
ဒီစာကို မွန်ဘိုင်းရဲဌာန(အိန္ဒိယနိုင်ငံ)ကနေ အမှန်တကယ်ပေးလာတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။
သင်သိသမျှလူတွေ ၊ သင့်ဇနီး၊ အမ၊ ညီမ၊ သမီး၊ တူမ၊ အမေ အမျိုးသမီး မိတ်ဆွေ နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ကို အထူးသဖြင့် မျှဝေပေးပါ။
ဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်ဖြစ်သည်။ လူတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး ဓာတ်ဆီထည့်ပေးတာကို ဆောင်ရွက်နေရင်း အမျိုးသမီးလေးတစ်ဦးက ဓာတ်ဆီလာဖြည့်တော့ သူရဲ့ လိပ်စာကဒ်လေးကို ပေးလိုက်တယ်။ သူမက ဘာမှပြန်ပြောမနေဘဲ လိပ်စာကဒ်လေးကို လက်ခံလိုက်တယ်။ သူမက လိပ်စာကဒ်လေးကို ခင်မင်မှုနဲ့ လှမ်းယူလိုက်ပြီး ကားထဲကို ထည့်ထားလိုက်တယ်။ ထိုသူကတော့ ကားထဲဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးနောက် အခြားသူက ကားကို မောင်းပြီးထွက်သွားတာတွေ့လိုက်ရတယ်။
အမျိုးသမီးက ကားပြင်ရုံဖက် ထွက်လာခဲ့တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သူမနောက်က လူတွေ လိုက်တာတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ သူမက မူးနောက်နောက်ဖြစ်သွားတယ်။ အသက်ရှူသံတောင် မမှန်ချင်တော့ဘူး။
မျှဝေသူ Unknown မှာ Sunday, March 25, 2012 No comments:
ဖုန်တစ်ထောင်းထောင်းထနေသော လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ခေါင်းစည်းများစည်း၍ တူညီဝတ်စုံ
၀တ်ဆင်ထားသော လူငယ်တစ်စု စီးလာသည့် ထော်လာဂျီ တစ်စီး ဖြတ်မောင်း သွားလေသည် ...
" ဟေး" ခနဲ့ ညာသံပေး၍ အော်ဟစ်လိုက်သော ဆူညံသံများကြောင့် လမ်းဘေး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး လှုပ်လှုပ် ရှားရှား ဖြစ်သွားကြသည် ... လမ်းဘေးရှိ ပြည်သူ အများ ကအထိတ်အလန့် ထွက်ကြည့်ကြသည် ..
" NLD လူငယ်တွေပါလား ..."
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်ကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံး ..
နိုင်ငံရေးအသိ နိုးကြားနေကြပြီဟု ဆိုနိုင်ပါသည် ... လက်ရှိအနေအထားအရ တစ်ပါတီ အာဏာရှင်
စနစ် မှ ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ စနစ်သို့ အသွင် ကူးပြောင်းရေး ကာလတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ခေါင်းဆောင်သော NLD ပါတီကသာ ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် စည်းရုံးရေးဆင်းနိုင်သည်ဟုဆိုလျှင် လွန်မည်
မထင် .. စည်းရုံးရေး ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်တွင်လည်း ပြည်သူလူထု ၏ အင်အားမှာလည်း အံ့မခန်း
မျှဝေသူ Unknown မှာ Wednesday, March 14, 2012 No comments:
ပါဘူး။International Social Network Myanmar ဆိုတဲ့ blog ကဘယ်တော့အခါမှမညာပါဘူးအခုရေးတဲ့ postကိုမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် email ကိုအပ်ပြီးပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။စာဖတ်သူတို့
မျှဝေသူ Unknown မှာ Thursday, March 08, 2012 No comments:
ကလေးဘဝကနေ ကြီးပြင်းအိုမင်းတဲ့ဘဝအထိ လျှောက်လှမ်းရတဲ့ ဒီမတိုမရှည် လမ်းခရီးတလျောက်မှာကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ ဆက်ဆံနေရတဲ့ လူ၊ အရာတချို့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရိုးသားဖြူစင်ခြင်းတွေကို အရောင်စုံရှုပ်ထွေးအောင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ လူတွေဟာ အသက်အရွယ်ပိုင်းတစ်ခုရောက်ရင်လူ့ဘဝမှာ သူတွေ့ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲပြဿနာတွေက သူ့ကိုခံစားချက်အသစ်၊ ဆင်ခြင်တွေးတောစရာအသစ်တွေ ဖြစ်စေတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကြီးပြင်းရင့်ကျက်ဖို့ အကူအညီပေးသူတွေဟာ လူကောင်းပဲဖြစ်နေပါစေ၊ လူဆိုးပဲဖြစ်နေပါစေ၊ စေတနာပါသူ၊မပါသူဖြစ်စေ.... သူတို့ကို ကျွန်တော်တို့ ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။
အောက်က ကာတွန်းတွေက ထိုင်ဝမ်ဘလော့ဂါ Mark Lee ရဲ့ ကာတွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မအီးမေးလ်ထဲ ရောက်လာတဲ့ သူ့ကာတွန်းတချို့ကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့ ဘာသာပြန်မျှဝေပါတယ်။ Mark Leeရဲ့ အခုခေတ်ဝန်ထမ်းလဏ္ခာဆိုတဲ့ ကာတွန်းတချို့ကို ဘလော့ဂါ ဒီဂိုလာလည်း မြန်မာလိုပြန်ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
ကဏ္ဍ Cartoon, Notice
from ပေါ်ပြူလာ by Popular News
ကိုယ်နှုတ်သောင်းကျန်း တစ်ဖက်အာရုံသို့ သွားရောက် သရမ်းခြင်းများသည် အတွင်းနေစိတ်ကို မထိန်းသိမ်းရာမှဖြစ်၏။
အတွင်းနေစိတ်သည်လည်း ဝါသနာ အနုသယ အတွင်းထတို့၏ လှုံ့ဆွနှိုးဆော်ခံရခြင်းကြောင့် ဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်ရာ ဝမ်းတွင်းကအပုပ် ဝမ်းနှုတ်ပစ်မှ စင်ကြယ်စေသည်ပမာ အတွေးစိတ်များမဝင် စိတ်ချည်းစင်ကြယ်နေစေရန် သတိကိုထုံ သရဏဂုံမပြတ်ပွား၊ တွေးစိတ် ပြေးစိတ်နှစ်ပါး ထိန်းကျောင်းပေးထားခြင်းဖြင့် ဥပုသ်သုံးကြရာ၏။ ။
မျှဝေသူ Unknown မှာ Monday, January 09, 2012 No comments:
ကဏ္ဍ Knowledge, Notice
FACE BOOK သုံးစွဲ သူ သူငယ်ချင်း များအတွက်ပါ
Face book Application Virus တစ်မျိုး ပြည်တွင်း၌ ပျံ့နှံ့ကူးစက်လျက်ရှိ
နာမည်ကြီး လူမှုရေးကွန်ရက် ၀က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော Face book တွင် ဆိုက်၏ Application ယောင်ဆောင်ထားသော Virus တစ်ခု နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့က စတင်၍ ပျံ့နှံ့ခဲ့ကြောင်း ၊
မျှဝေသူ Unknown မှာ Friday, March 18, 2011 No comments: